ညီနေမင်း-(နည်းပညာ) ကွန်ပြူတာသင်ခန်းစာများ Lesson 2.2 ~ IT Guide Myanmar
ညီနေမင်း-(နည်းပညာ) ကွန်ပြူတာသင်ခန်းစာများ Lesson 2.2
6:17 PM ညီနေမင်း-(နည်းပညာ) ကွန်ပြူတာသင်ခန်းစာများ No comments
Facebook တွင်လည်း သင်ခန်းစာ video များကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီ.
Lesson 2.2 Power Options အကြောင်း
Lesson2Standard user အကောင့်တစ်ခုကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ
ParetoLogic Data Recovery Pro v1.1 With Patch
Format Factory 3.1.1 Latest version
Posted: 10 Jul 2013 05:07 PM PDT
ကျနော် Facebook မှာလည်းပဲ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ဖတ်ရှု့လို့ ကြည့်လို့ရအောင် Page တစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်။ အခု သင်တန်းအစီအစဉ်ကို သဘောကျသည့် သူငယ်ချင်းများ Like လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာများတွင် အားနည်းချက်များ ရှိပါက ၀င်ရောက် ထောက်ပြအကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပြီး ဖြည့်စွက်ပေးသွားပါ့မယ်။ ခုသင်တန်းက Basic ပြီးသွား ရင် နောက် ပိုင်း ဒီဇိုင်းပိုင်းနှင့် Web ပိုင်းကိုလည်း သင်ပေးဖို့ အထိ ကျနော် ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ Page ကတော့
http://www.facebook.com/NyiNayMinIT ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် မိပါတယ်။
Posted: 10 Jul 2013 09:54 AM PDT
ကွန်ပျူတာတွေမှာ ကွန်ပျူတာကို ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ ကွန်ပျူတာ ပိတ်သွားတာတွေ sleep ဖြစ်သွား တာတွေကို သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အဲ့လို ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်သလဲဆိုရင်တော့ control panel ထဲ က setting တွေကို မပြင်မိလို့ ဖြစ်တာပါ။ အဲ့တော့ အဲ့ဒီ့ power option ထဲမှာ ဘယ်လို ၀င်ပြင်ရမလဲ ဆိုတာကို အသေး စိတ် ရှင်းပြထားပေးပါတယ်. မများပါဘူး။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted: 10 Jul 2013 07:44 AM PDT
မနေ့ကတုန်းက သင်ပေးလိုက်တာ သိပ်နားမလည်ဘူး ဆိုလို့ အခု အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြ ထားပေးပါတယ်။ အခု video ကို ထပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အခုလောက်ဆိုရင်တော့ administrator တစ်ယောက်ကနေ standard user ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ.
Posted: 10 Jul 2013 05:03 AM PDT
ဒါကလည်း Data, photo, video စတာတွေကို ပြန်ယူနိုင်တဲ့ recovery tool တစ်ခုပါပဲ။ တောင်းထားတာ တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေ မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Zippyshare | Ziddu | Rapidshare | Solidfiles | Thusiles | Mirrorcreator |
Posted: 10 Jul 2013 04:55 AM PDT
နောက်ဆုံးထွက် version ပါ. တောင်းထားသူရှိလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ format factory က မျိုးစုံရတော့ ဒီ converter ကို လူတိုင်း နီးပါး သုံးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။
Zippyshare | Ziddu | Fileclousd | rapidshare | Solidfiles | Thusiles | Mirrorcreator |
ဒါကတော့ Pdf converter ပါ ဘာတွေ ရသလဲဆိုရင် အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ အရမ်းစုံလို့ ထပ်တင်ပေး လိုက်တာပါ။ တော်တော်လေး ကို စုံပါတယ်။ တစ်ခုတည်းနဲ့ အစုံရတော့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့. ခုတစ်လော သင်တန်းအတွက် အသံဖိုင်တွေကို လုပ်လိုက် ပြန်ဖျက် လိုက်နဲ့ ရွာလည်နေတာ. အသံမပါဘဲ ရှင်းပြလို့ရပေမယ့် အသံမပါရင် သင်တဲ့သူအတွက် အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ အသံကို ထည့်ပေးလိုက်ရတာပါ။ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် video ဖိုက်ဆိုက်ဒ် အရမ်းကြီးသွားမှာ စိုးတာကြောင့်မို့ ခပ်မြန်မြန်နဲ့ လိုရင်းကို ပြောပြတာဖြစ်လို့ နားမလည်တာများရှိရင် ခွင့်လွှတ်နားလည် ပေးစေလိုပါတယ်။ တစ်ခေါက်နဲ့ နားမလည်ရင် ၂ ခေါက်လောက် ထပ်ကြည့်ပေးစေလိုပါတယ်။ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ Youtube မှာ ကွန်မန့် ၀င်ရေးသွားလို့ရပါတယ်။
Posted: 10 Jul 2013 03:48 AM PDT
ခုကတော့ gtalk ကနေ Zawygi keyboard ကို ထည့်ထားပေ မယ့် မြန်မာလို အဆင်ပြေပြေ မမြင်ရဘူး စာရိုက် လျှင် လေးထောင့် တုံးတွေပဲ မြင်ရလို့ဆိုပြီး အကူအညီတောင်း လားလို့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လုပ်ရမှာက ၃ နေရာမှာပဲ setting ပိုင်း ၀င်ပြင်ပေးရမှာပါ။ ကဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ. အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ခုသင်ပေးတဲ့အတိုင်း ၃ နေရာမှာသာ ၀င်ပြင်ပေး လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် အားလုံးမှာ မြန်မာလို မြင်ရပါပြီ။